ग’र्भवती श्री’मतीको पेटमा छोरी छ भन्ने आ’शंकामा श्री’मानले का टे श्री’मतीको पेट !!!! « गोर्खाली खबर डटकम
ग’र्भवती श्री’मतीको पेटमा छोरी छ भन्ने आ’शंकामा श्री’मानले का टे श्री’मतीको पेट !!!!
काठमाडौ : समाजमा कल्पना नै गर्न नसक्ने घ’टना हुन्छन् । ग’र्भवती अवस्थामा म’हिलालाई थप हेरचाह र मायाको आवश्यकता हुन्छ । तर एक म’हिलालाई भने छैटौं पटक पनि छोरी ज’न्माउन लागेको भन्दै पेट का टि एको छ । भा’रतको उत्तरप्रदेशको बदायूं जिल्लामा एक श्री’मानले आफ्नी ग’र्भवती श्री’मतीको पेट का टे र छोरा हो वा छोरी हो भनेर हेर्न खोजेको बताइन्छ ।
घा’इते म’हिलालाई ग’म्भीर अवस्थामा दिल्लीको एक अ’स्पतालमा भर्ना गरिएको छ । प्र’हरीले श्री’मानलाई प’क्राउ गरेको छ । बदायूंका एसएसपी संकल्प शर्माले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा भने, ‘घा’इते म’हिलाको भाइको तर्फबाट ऊ’जुरी आएपछि श्री’मानलाई प’क्राउ गरिएको हो । तर घ’टनावारे थप अ’नुसन्धान हुँदैछ ।’
बदायू जिल्लाको सिभिल लाइन्स थाना क्षेत्रको नेकपुर मोहल्लेमा बस्ने पन्नालालले आफ्नी ग’र्भवती श्रीमती अनिताको पेट हँ सि याले का’टि’दि एको आ’रोप छ ।
अनिताको परिवार अनुसार पन्नालाल श्री’मतीको ग’र्भमा रहेको छैटौं सन्तान छोरा हुन् वा छोरी भनेर हेर्न चाहन्थे । पन्नालालकी श्री’मतीकी बहिनी रेखाले मिडियासँगको कुराकानीमा पन्नालालका पाँच छोरी छन् र छैटौं सन्तान पनि छोरीको रुपमा जन्मियोस् भनेर उनी चाहँदैनन् ।
रेखा भन्छिन्, ‘पन्नालालको आफ्नी श्री’मतीसँग यसबारे धेरैजसो झ ग डा भइरहन्थ्यो । उनले अनितामाथि कु ट पि ट पनि गर्ने गर्दथ्यो । शनिबार पनि उनले अनितालाई नि र्घा त कु टे र हँ’सि’या’ले ह म ला गरे ।’
अनिताका भाइ राजिवका अनुसार बरेलीमा डाक्टरको सल्लाहमा अनितालाई आइतबार दिल्ली लगिएको छ किनभने उनको स्थिती ग’म्भीर छ । राजिव पनि उनीसँगै छन् ।
छ महिनाभन्दा बढी समयपछि सोमबारदेखि आ’न्तरिकतर्फको नियमित उडान सुरु हुँदै छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएको २० दिनपछि आन्तरिक उडान खुला भएको हो । सोमबारदेखि हुने उडानका लागि नियामक उड्डयन प्राधिकरणले सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । उडान सञ्चालनका लागि निर्धारण गरिएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड विमानस्थलमा अपनाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
को’भिड–१९ कै कारण स’रकारले आन्तरिक उडानमा लगाएको प्र’तिबन्ध भदौ २९ को म’न्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स’रकारले असोज १ देखि नै आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने बाटो खु’ला गरे पनि वायु सेवा सञ्चालकले तयारी पूरा नभएको र ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर उडान गर्न नसकिने अडान राखेपछि पाँच दिनपछि सरेको हो । सोमबारदेखि वायु सेवा कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न पाउने छन् ।
यद्यपि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज १६ सम्म २५ प्रतिशतसम्म उडान हुनेगरी तालिका स्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि माग र औ’चित्यका आधारमा उडान तालिका स्वी’कृत गर्नेगरी सं’स्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयपछि खुला भए पनि आन्तरिक उडानको टिकट बुकिङ उ’त्साहजनक नै रहेको छ । यति एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार सोमबारको उडानका लागि ७० प्रतिशतसम्म टिकट बुकिङ भएको छ । अन्तिम समयसम्म पनि बुकिङ खुला रहने भएकाले यो सङ्ख्या अझ बढ्नसक्ने उनले बताए ।